Boliiska oo ka digay shabakadda xiriirka internet ee sugardating - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Simon Häggström, dembi-baare kooxda ka ganacsiga bani’aadamka ee laanta Noa. sawir: TT/Privat.
Boliiska oo ka digay shabakadda xiriirka internet ee sugardating
"dhileeysiga ayaa la qurxineyaa oo warqad dahab lagu duubey"
La daabacay torsdag 14 september 2017 kl 14.53
Ciidanka ammaanka ayaa iminka ku dhiiraday inuu dhallaanka wiilasha iyo gabdhaha uga digo shaashadda xiriirka ee lagu magacaabo sugar-daiting.
Xayeeysiinta shaashadda oo maalmihii u dambeeyey la hadal-hayay, gaar ahaan magaalada Göteborg oo ardey la isku dayay in lagu soo jiito iney ka kaaftoomaan deeymaha ardey-nimada lagu qaato.
–Shaashadahan ayaa dooneya iney middaa u muujiyaan suuq-geeyn (xayeeysiin) sidii goobo la isku barto. Hase yeeshee uu macnaha ka dambeeyaa yahay in rag iyo haween ey ku bixiyaan lacag, hadiyad iyo deeq sidii lagu heli lahaa wiilal iyo gabdho wehel laga dhigto, sida uu sheegay Simon Häggström, dembi-baare kooxda ka ganacsiga bani’aadamka ee laanta Noa, polisens nationella operativa avdelning.
–Waa habka xayeeysiinta loogu sameeyo, waxaa la isku dayaa in warqad qurxoon lagu duuduubo dhileeysi sidii hadiyad oo laga dhigo wax aanay ahayn, sida uu sheegay .
Ciidanka ammaanka ayay iminkaba ku adag tahay sidii uu albaabbada ugu laabi lahaa bogagga sida furan u xayeeysiiya dhileeysiga iyo shaashadaha xayeeysiiya waxa ey ugu magac-dareen xiriirrada macaan – sugardating, iyada oo la qoro in dhlieeysigu aanu ahayn mamnuuc.
Simon Häggström ayaa ula jeeda in ereyga wehel uu macnihiisu yahay xiriir galmo.
Cidda inta badan ku dhacda ayaa ah dhallin-yaro horeyba halis ugu jirtay ama qarka u saarnayd.
–Waa dad dhibaateey-san. Caafimaad darro maskaxeed oo marar badan uu ka dambeeyay kufsi. Magaalo ayaan dhowr toddobaad hortood kula kulmay afar hablood oo arrimmahaa ku shaqeeysta, dhammaantood waxey horay u soo mareen kufsi.